Tapglue: Qalabka Lahabeyn Karo Si Loogu Wareejiyo Badeecadaada Shabakad Bulsho. | Martech Zone
Sabtida, Oktoobar 17, 2015 Talaado, Agoosto 18, 2020 Douglas Karr
Tapglue waxay awood kuu siineysaa inaad ku darto lakab bulsheed barnaamijkaaga saacado gudahood, taasoo kuu oggolaaneysa inaad diirada saarto abuuritaanka khibrad adeegsade cabsi leh iyo kobcinta bulshadaada.
Iyada oo la adeegsanayo lakabka bulshada ee 'Tapglue' iyo furahayada & ku ciyaarida quudinta wararka, waad ka faa'iideysan kartaa awoodda shabakadaha isku xiran, adigoo u oggolaanaya dadka isticmaala inay abuuraan astaamo shaqsiyeed, kula xiriiraan asxaabtooda, iyo kobcinta kaqeybgalka ugu badan.
Tilmaamaha TapGlue Ku dar:
News Feeds - In la dhiso quudinta wararka bulshada ee dhaqaajisa haynta, ka qayb qaadashada, iyo shaqsiyeynta. Abuur waayo-aragnimo firfircoon oo ku saabsan waxyaabahaaga jira iyo waxqabadka isticmaalehaaga. Waxyaabaha la dhisay-ka ah, faallooyinka, iyo saamiyada ayaa hubin doona inaad adigu iyo waxyaabaha isticmaalahaagu fido. Muuji qoraallada isticmaaleyaasha, dhacdooyinka, sawirrada, iyo inbadan si aad u abuurto siyaabo cusub oo aad kula xiriirto isticmaaleyaashaada.
Qormooyinka Macmiilaha - Abuur bulsho adoo kudaraya astaamaha isticmaalaha alaabtaada. U oggolow kuwa isticmaala inay ku darsadaan oo beddelaan sawirrada ama la midoobaan Facebook. Ku dar nooc kasta oo ah macluumaadka astaamaha isticmaalaha iyo doorbidkaaga. Muuji tirada dadka raacsan ama asxaabta ah. Muuji quudinta dhaqdhaqaaqa ku saleysan isticmaalaha iyo waqtiyada. U oggolow isticmaalayaasha inay abuuraan calaamado, liisaska rabitaannada, kuwa ugu cadcad, liisaska daawashada, iyo waxyaabo kaloo badan.
Notifications - Ka dhig kuwa isticmaala inay soo dhigaan waxa ka dhacaya shabakadooda. Qeex dhacdooyinka iyo ogeysiisyada aad rabto inaad muujiso - iyadoo aan loo eegayn hadday tahay wax la mid ah, beddelashada sawir muuqaal ah ama helitaanka raace cusub. Ku muuji calaamadaha aan la aqrin ee ku jira abka ama shaashadda guriga isticmaaleha si aad uga faa'iideysato waxqabadka bulshadaada isla markaana aad waddo haynta si aad u habboon.
Asxaabta iyo Kuwa raacsan - Abuur shabakado furan ama gaar loo leeyahay si loo abuuro garaaf bulsheed awood badan ku leh sheygaaga. Kala dooro asxaabta ama qaabka raacsan ee shabakadaada. Ka faa'iideyso Facebook, Twitter ama buugga cinwaanka loogu talagalay Soo hel saaxiibo. U oggolow isticmaalayaasha inay raadiyaan kuwa kale si ay u helaan dad ay xiriir la yeelan karaan.
Tapglue hadda waxay ka mid tahay meelaha deegaanka loo yaqaan 'Upland Localytics'
Tags: waxqabadka quudintaquudinta dhaqdhaqaaqa bulshadaquudinta bulshadaxargahaapi tapgluefeed tapgluetapglue sdkwaxqabadka bulshada tapglue api
Maxay Barashadu u tahay Aaladda Ka Qaybgalka Hormuudka Suuqlayaasha